4 Zvino rudzi rwose parwakanga rwangopedza kuyambuka Jodhani,+ Jehovha akati kuna Joshua: 2 “Tora varume gumi nevaviri pavanhu, murume mumwe chete padzinza rimwe nerimwe,+ 3 uvarayire uchiti, ‘Torai matombo gumi nemaviri+ pakati paJodhani, panzvimbo yakamira tsoka dzevapristi dzisingatsuduguki,+ muyambuke nawo muaise panzvimbo yamucharara+ usiku huno.’” 4 Naizvozvo Joshua akashevedza varume gumi nevaviri+ vaakanga agadza pavanakomana vaIsraeri, murume mumwe chete padzinza rimwe nerimwe; 5 Joshua akati kwavari: “Endai kumberi kweareka yaJehovha Mwari wenyu muende pakati paJodhani, mumwe nomumwe wenyu atakure dombo papfudzi rake, maererano nokuwanda kwemadzinza evanakomana vaIsraeri, 6 kuti ichi chive chiratidzo+ pakati penyu. Kana vanakomana venyu vakazobvunza munguva inouya, vachiti, ‘Nei mune matombo aya?’+ 7 Mutiwo kwavari, ‘Nokuti mvura yaJodhani yakaganhuka+ pamberi peareka yesungano yaJehovha. Payakayambuka nomuJodhani, mvura yaJodhani yakaganhuka, uye matombo aya achava sechiyeuchidzo kuvanakomana vaIsraeri nokusingagumi.’”+ 8 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo, sezvakanga zvarayirwa naJoshua, vakatora matombo gumi nemaviri pakati paJodhani, sezvakanga zvaudzwa Joshua naJehovha, kuti aenzane nokuwanda kwemadzinza evanakomana vaIsraeri;+ vakayambuka nawo vachienda kunzvimbo yavaizorara,+ vakaaisa ipapo. 9 Kwaivawo nematombo gumi nemaviri akamiswa naJoshua pakati paJodhani panzvimbo yakanga yakamira+ tsoka dzevapristi vakanga vakatakura areka yesungano, uye achiripo kusvikira nhasi. 10 Zvino vapristi vakanga vakatakura Areka vakanga vakamira pakati+ paJodhani kusvikira zvinhu zvose zvapera zvakanga zvarayirwa Joshua naJehovha kuti audze vanhu, maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Joshua naMosesi.+ Panguva yose iyi vanhu vakakurumidza,+ vakayambuka. 11 Vanhu vose pavakanga vangopedza kuyambuka, areka+ yaJehovha yakabva yayambukawo, nevapristi, pamberi pevanhu. 12 Vanakomana vaRubheni nevanakomana vaGadhi nehafu yedzinza raManase+ vakayambuka vakagadzirira kurwa+ vari pamberi pevanakomana vaIsraeri, sezvavakanga vaudzwa naMosesi.+ 13 Vanenge zviuru makumi mana vakanga vakagadzirira kurwa vakayambuka pamberi paJehovha nokuda kwehondo vachienda kumapani erenje eJeriko. 14 Pazuva iroro Jehovha akakudza Joshua pamberi pevaIsraeri vose,+ vakatanga kumutya sokutya kwavaiita Mosesi mazuva ose oupenyu hwake.+ 15 Jehovha akabva ati kuna Joshua: 16 “Rayira vapristi vakatakura areka yechipupuriro+ kuti vabude muJodhani.” 17 Naizvozvo Joshua akarayira vapristi, achiti: “Budai muJodhani.” 18 Vapristi vakanga vakatakura areka+ yesungano yaJehovha pavakabuda vachibva pakati paJodhani uye tsoka+ dzevapristi dzabuda dzichienda panyika yakaoma, mvura yaJodhani yakabva yatanga kudzokera panzvimbo yayo uye yakatanga kufashukira+ mahombekombe arwo ose sekare. 19 Vanhu vakabuda muJodhani nomusi wechigumi womwedzi wokutanga vakadzika musasa kuGirigari+ iri pamuganhu wokumabvazuva kweJeriko. 20 Kana ari matombo gumi nemaviri avakanga vatora muJodhani, Joshua akaamisa+ kuGirigari. 21 Akati kuvanakomana vaIsraeri: “Vanakomana venyu pavanobvunza vanababa vavo munguva inouya, vachiti, ‘Matombo aya ndeei?’+ 22 Ibvai maita kuti vanakomana venyu vazive, muchiti, ‘Israeri akayambuka rwizi rwaJodhani urwu nepanyika yakaoma,+ 23 Jehovha Mwari wenyu paakaomesa mvura yaJodhani pamberi pavo kusvikira vayambuka, sezvakanga zvaitwa Gungwa Dzvuku naJehovha Mwari wenyu paakariomesa pamberi pedu kusvikira tayambuka;+ 24 kuti marudzi ose enyika azive ruoko rwaJehovha,+ kuti rune simba;+ kuti chokwadi mugare muchitya Jehovha Mwari wenyu.’”+